Ku soo dhowaaw Tartanka Gabayada Silsiladda Nabadda ee 2020 - European External Action Service
EEAS homepage > Syria > Ku soo dhowaaw Tartanka Gabayada Silsiladda Nabadda ee 2020
Mogadishu, 10/08/2020 - 08:34, UNIQUE ID: 200810_1
10-ka ilaa 31-ka Agosto
Midowga Yurub waxuu ku faraxsanyahay inuu baahiyo qeybtii labaab ee Tartanka Gabayada ee Silsilada Nabadda. Iyadoo laga duulaayo guushii laga gaaray tartankii sanadka 2019 kaasoo mowduuciisu ahaa dimuqraadiyadda, ayaa qeybtan sanadkan 2020-ka waxaa loogu yeerayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan wada-hadalkii gabayada sandkii tagay iyagoo soo gudbinaya gabay uu mowduuciisu yahay “Magaaladayda, mustaqbalkayga”
Mowduuca sanadkan ma’ahan mid la iska soo xulay. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay leeyihiin aragti ku aadan qaabka ay doonayaan inuu dalkooda isku bedello iyo sida ay doonayaan in magaalooyiinkooda uga muuqato isbedelkaas. Mowduucan ayaa goor horeba baraha bulshada ka dhaliyay xiiso iyo wada-hadal, iyagoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo dhigayeen sawirada magaalooyiinkooda. Hadaba tartanka sanadkan, kasoo qeybgalayaasha waa inay inoo sheegaan waxyaabaha magaalooyiinkooda ka dhigaya qaas iyo sibedelka iyo fursadaha ay rajaynayaan in mustaqbal wanaagsan lagu dhiso.
3-daxda qof ee ku guuleysata tartanka sanadkan 2020-ka waxay helayaan mobeelo casri ah oo ay la socdaan aaladaha sawirada la isaga qaado iyo qalabka makarafoonka, sidoo kale magacyada 12-ka qof ee tartanka ugu horeysa waxaa lagu shaacinayaa bogga rasmiga ee Tartanka. Tartanka gabayada sanadkan waxuu lahaan doonaa qaab maqal iyo muuqaal ah. Waxuu u furanyahay Soomaalida oo dhan, kasoo qeybgalayaashu waxay gabaygooda ku soo gudbinayaan qaab muuqaal ah oo ugu badnaan gaaraya 2 daqiiqo.
Gabayadu nooc walba ayey noqon karaan sida mid lagu luuqeeyo, mid sawiro ah oo cod dul saaran ama xitaa hees. Gabayadu waxaa lagu soo gudbin karaa af Soomaali ama luuqadda Ingiriiska, waana qasab inay noqotaa mid uu xuquuqdeeda leeyahay qofka tartanka soo galaya. Gabayada dhamaan waa in la soo gudbiyaa inta u dhexeysa 10-ka bisha Agosto iyo 31-ka bisha Agosto sanadka 2020-ka, iyadoo la soo marinaayo linkiga https://www.silsiladdanabadda.com/p/896810
waxay sidoo kale halkan tartamayaasha ka helyaan macluumaad dheeri ah.